Port Isaac, ihe niile ị chọrọ ịma | Akụkọ Njem
Port Isaac, bụ obodo ebe a na-ese ihe nkiri Doc Martin
Mariela Carril | | Getaways Europe, England
Agbanyeghi na igwe onyonyo TV nke America weghaara ụwa, ọ dabara nke ọma enwere ohere maka usoro site na latitude ndị ọzọ. Na Doc Martin, Usoro Bekee, bụ ngwaahịa emerela nke ọma, na-atọ ụtọ.
Doc Martin juru m anya na TV TV afọ ole na ole gara aga. Enwere m obi ụtọ na eziokwu ahụ bụ na onye na-akwado ya dị njọ ma bụrụ onye na-enweghị omume enyi, mana nkeji abụọ ka e mesịrị, enwere m nsogbu na-adịghị mma nke dọkịta na-awa ahụ gbanwere dọkịta obodo. Leekwa obodo! A na-esere ya na Port Isaac, Cornwall, a mara mma ebe ọ bụrụ na e nwere otu.
2 ọdụ ụgbọ mmiri Isaac
3 Ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Port Isaac
4 Ebe ịnọ
5 Uzo esi abia
Ọ bụ usoro Bekee, ihe ọchị, nke weputara otutu oge na England, n'etiti 2004 na 2015. Usoro a bu "nwupu" site na ihe nkiri a na-akpọ Na-echekwa amara olee ebe agwa onye dibia di?
N'ime igwe onyonyo Martin Ellingham ọ bụ dọkịta na-awa dọkịta na n'ihi ihe ụfọdụ, ọ na-amalite ịpịa mmadụ ọbara, ọ ghaghịkwa ịkwụsị ịrụ ọrụ. Ya mere hapụ London na na-aga dị ka onye dọkịta n'ozuzu n'otu obere obodo dị n'ụsọ oké osimiri a na-akpọ Portwenn, Otu ebe ahu otutu oge gara aga o jiri oge nwata.
Site na ya oge a na-eso ibe ya, na mmekọrịta dị n'etiti dọkịta na ndị obodo ahụ na ndụ ha, ọrịa na nsogbu. Omume ya dị egwu ma ọ bụghị omume enyi niile ya mere ụda ọchị dị egwu. Ọbụna ọ hụrụ n'anya wee mee "enyi nwanyị" ya ime, ọbụlagodi mgbe nsogbu ya na mmekọrịta mmekọrịta ya na mmekọrịta mmụọ adịghị edozi.
Usoro a mere nke ọma enwere mmegharị na mba ọzọ: France, Germany, Austria, Greece, Netherlands na Spain na aha ya Dọkịta Mateo.
ọdụ ụgbọ mmiri Isaac
Mgbe a na-eme ihe nkiri TV ma ọ bụ ihe nkiri na ọnọdụ nkịtị, ha na-ewu ewu ozugbo ma bụrụ ndị na-akwado akụkọ ahụ. Nke a bụ ihe mere obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke Doc Martin.
Ọ bụ ezie na aha aghụghọ bụ Portwenn a na-akpọ obodo ahụ Port Isaac na dị n’akụkụ ugwu nke ógbè mara mma nke Cornwall. N'ezie, ọ mara mma nke ukwuu na Doc Martin abụghị agbapụ izizi ebe a, mana ọ bụ ya kacha ewu ewu.
Ewubere ya n'ọdụ ụgbọ mmiri n'oge Henry nke Asatọ ya mere, ụlọ ochie ya malitere site n'oge ahụ na site na narị afọ nke XNUMX. Ọ na-abụkarị Obodo Fisher ma taa ọ bụ mpaghara echekwara nke Cornwall na onye nwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị ụlọ akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụ ezie na ruo n’afọ ndị 60, ọ ga-ekwe omume iji ụgbọ oloko rute ebe ahụ, ọdụ ahụ ka dị kilomita ole na ole site na ya, nkwụsị a na-apụghị igbochi azụ ahịa tiketi mere ka emechie ngalaba ụgbọ okporo ígwè. Taa ọ bụ ụgbọ ala na-abata n'obodo.
Ọ bụrụ n ’ị banye bọs ma ọ bụ ụgbọ ala ị ga-anọ n’elu ugwu ebe nnukwu ebe a na-adọba ụgbọala dị. Ga-agbada ruo obodo na-agagharị n'okporo ámá ndị dị warara, mana ọ bara uru n'ihi na echiche ị na-enwe dị egwu.
Ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Port Isaac
E kwupụtakwala Port Isaac na obodo ọzọ dị nso akpọrọ Port Gaverne Mpaghara nke Mma Mma Mma na Mpaghara Osimiri, yabụ enwere ọtụtụ njegharị na njem nlegharị anya n'ime obodo nakwa n'ụsọ oké osimiri.
N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnweta osimiri ndị ọzọ dị nso, ebe ọ bụ la obodo nwere naanị otu osimiri na ndị ọzọ ọbụna mara mma. Ileta obodo ahụ oge kachasị mma n'afọ bụ oge ọkọchị n'ihi na ọrụ ụgbọ ala na-adịkarị ma jikọta ọtụtụ obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Na mgbakwunye, ebumpụta ụwa, ịga ije n'èzí na ụbọchị osimiri na-atọkarị ụtọ karị. Isi kilomita isii dị osimiri Polzeath, ezigbo maka sọọfụ na otu n’ime ihe kachasị mma na nke ahụ na North Cornwall, ya mere osimiri dị n’akụkụ ụzọ, Merbọchị Bay.
E nwekwara ndị mara mma Ogologo Ubi Krọọs, Ụdị Victorian, na Trelights, the Pencarrows in Washaay, dịka ọmụmaatụ. Na n'oge ndị njem nleta nwere ike isonye ụgbọ mmiri na-aga gburugburu ọdụ ma ọ bụ njem mmụta azụ.
Na anyanwụ na ezigbo ihu igwe enwere igwe kwụ otu ebe na-agba ịnyịnya site na Kamel Okporo ụzọ, nke jikọtara Padstow, Wadebridge na Bodmin (a na-agbazite igwe kwụ otu ebe), ma ọ bụrụ na golf na-amasị gị, enwere klas golf abụọ mara mma na mpaghara ahụ. A ọma ụgbọ oloko uzuoku ọ dịkwa oke British Na ebe a bụ obere ụgbọ oloko abụọ dị ka nke a: otu bụ Bodmin Steam Railway (nlele ọkọlọtọ), nke ọzọ bụ Laucenston Steam Railway, warara nlele.
Iji mee obere ụgbọ oloko ndị a, ị ga-ahapụ Port Isaac maka obodo ndị dị na mpaghara ahụ. N'ọnọdụ Bodmin ọ bụ n'ụsọ oké osimiri nke Bodmin Moor ma nwee oke nkume nkume, ndagwurugwu na ugwu. Ọ bụ n'otu n'ime ndagwurugwu ndị a mara mma ka Port Isaac dị.
N'ikpeazụ, na mgbakwunye na Port Isaac, e nwere obodo ọzọ fọrọ nke nta ka ejima ya bụ nke Port Gaverne. Ọ bụ ezie na ọ bụ obodo dị iche, ha dị ezigbo nso ma ị ga-eleta ha abụọ. Port Gaverne mepụtara na narị afọ nke XNUMX dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na nkume nzu yana obere ogige ụgbọ mmiri.
A gbanweela nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ka ọ bụrụ ebe obibi ezumike na obere mmiri, osimiri mara mma pụtara, zoo, yana ọtụtụ obere ọdọ mmiri, dị mma maka ụmụaka.
O doro anya, ndị rutere Port Isaac na-eme nke a n'ụzọ dị ukwuu enwe mmasị n'ihe ndekọ nke Doc Martin ya mere ụlọ ya, ọfịs ya, ụlọ akwụkwọ ya, na ụlọ obibi ya bụ ebe ndị mmadụ na-ekwo ekwo.
Ọ bụrụ n ’echiche gị ga-anọ ụbọchị ole na ole mgbe ahụ ị gaghị enwe nsogbu ịchọta ebe obibi na Port Isaac ma ọ bụ obodo ọ bụla ọzọ dị n’akụkụ mmiri. Na Port Isaac akpan akpan enwere ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ yana kwa ụlọ mgbazinye njem nleta nke ọnụahịa ha na-amalite na 400 pound.
Cornwall bu ala nke nwere oke osimiri n’oké Osimiri Celtic na Osimiri Bekee. Site na London ị nwere njem karịrị awa anọ. Ihe kachasị mma bụ ịgbazite ụgbọ ala n'ihi na njem ahụ jupụtara na mbara ala mara mma ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iwe ya ụgbọ oloko ọsọ ọsọ site na Paddington ruo Truto wee si ebe ahụ were bọs ahụ.
Enwekwara ụgbọ oloko kwa ụbọchị site na Bath na Bristol ma n'ezie ị nwere ike fega na Cornwall ma ọ bụ bịarute n'ụgbọ mmiri site na Ireland, France, Spain, Holland na ọbụna Denmark.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Port Isaac, bụ obodo ebe a na-ese ihe nkiri Doc Martin
Annabelle Correa dijo
Na-akpali nnọọ mmasị! Enwere m nnọọ nchegbu ịmara ebe a na-ese Doc Martín, usoro nke masịrị m nke ukwuu, ọ na-atọ ọchị ma bụrụ ihe amamihe dị na ya ma ebe ahụ dọọrọ uche m, agwaetiti ahụ mara mma nke ukwuu, n'ọtụtụ ebe na n'ọtụtụ ebe ị nwere ike ịhụ oké osimiri na nke ahụ. na-eme ka ọ mara mma. Daalụ maka itinye anyị ndị na-amaghị England. Ewoo! ọ masịrị m ọtụtụ ndị bekee, dịka Jean Austen, Shekespeare na Queen Group, tinyere ndị ọzọ.
Zaghachi Anabel Correa
Ọ ga-amasị m ịmara ebe ụlọ ahụ dị, ebe a na-akpọrọ nwa dọkịta mgbe nwanyị ahụ jidere ya site na ahịa ọgwụ, n'otu n'ime usoro nke usoro a na Hotel El Castillo nke pụtakwara ebe ahụ na ihe omume ahụ
Zaghachi Jorge Moncayo
Enwere m mmasị na usoro a, ọkachasị ebe ọ bịanyere aka na ya, ọ ga-amasị m ibi n'àgwàetiti ahụ, ọ mara mma
Zaghachi Cesar Suarez Rodriguez
Usoro magburu onwe ya, ebe mara mma, Bekee dị egwu. Kedụ ka m ga-esi ruo obere obodo a, ọ bụrụ na Chukwu kwado, aga m aga England n’ọnwa Julaị ma a na m eme atụmatụ nleta enwere ike
Zaghachi Sonia alfaro
M gara England n’afọ gara aga ma ahụrụ m Bekee n’anya karịsịa n’ihi na ha gụrụ akwụkwọ. Ana m elekwa usoro doc martin ma ụjọ na-atụ m maka ọdịdị ala
Zaghachi Laura Henry
Hahaha mu na di m na-ekiri usoro a, ike agwughi m na igwa ya na achoro m ije ebe ahu?
Nwee ezigbo njem Sonia, enwere m olile anya na ọchịchọ gị ịga leta obodo a mara mma emezuru !!!
M bi na Costa Rica na njem dị ogologo, ma ọ gaghị ekwe omume!
Ọ dịlarị na ndepụta anyị !!!
Zaghachi Priscilla Aguilar
Ndewo, a na m eme atụmatụ njem na Cornwall na ọdụ ụgbọ mmiri isaac bụ otu n'ime obodo ndị m chọrọ ịga mana anaghị m ahụ ụgbọ ala na-aga ebe ahụ. N'otu peeji ọ na - ekwu 584 mana mgbe m gara ụlọ ọrụ ka m hụ nhazi oge ọ na - ekwu na ọ dịghị adị, ị nwere ozi gbasara ya?
10 Ememme Galicia n'oge ọkọchị nke ekwesighi ịhapụ (II)
Ihe ịga leta na Florence